Yaa ku soo baxay Guddoomiye Xigeynka 1-aad iyo 2-aad ee Aqalka sare? | KEYDMEDIA ENGLISH
Yaa ku soo baxay Guddoomiye Xigeynka 1-aad iyo 2-aad ee Aqalka sare?
Kursigaan waxaa hore ugu fadhiyay, Abshir Maxamed Axmed (Bukhaari), kaasoo hadda aan ka mid ahayn xubnaha Golaha Aqalka sare, kadib markii uu Qoorqoor ka hor istaagay tartanka kursigii uu ku fadhiyay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiye ku xigeynka 1-aad ee Golaha Aqalka sare, ayaa loo doortay Sanator Cali Shabcaan Ibraahim oo laga soo doortay Hirshabeelle, kadib markii uu tartanka kaga adkaaday Sanator Cabdixakiin Macallin Axmed Maalin, oo ka yimid maamulka Galmudug.
Tartanka kursiga, ayaa la go’aamiyay in dib loogu laabto, kadib markii labada musharrax isku garab dhaceen, wareeggii koobaan, maadama tirada Golaha ay tahay tiro dhaban ah,  Sanator Cali Shabcaan Ibraahim aya helay 28 Cod, halka Sanator Cabdixakiin Macallin Axmed uu la yimid 25 Cod.
Cuddoomiyaha Cusub, Sanator Cali Shabcaan, wuxuu ka mid yahay dhallinyarada sanadkaan ku cusub siyaasadda, kuna daaban dhanka musharixiin mucaarad ah, halka Cabdixakiin uu sanadihii danbe ku saf ahaa kooxda Farmaajo.
Sanator Cabdixakiin Macallin, wuxuu ka mid ahaa xildhibaannadii, ka soo hore jeeday bannaan-baxyadii nabadeed ee dadka reer Muqdisho, doonayeen in ay argatidooda ku muujiyaan sanadkii hore, wuxuuna si aan gambasho lahayn u garab taagnaa Farmaajo.
Inta badan shaqsiyadkii Farmaajo la shaqeeyay, gaar ahaan kuwa ku taageeray muddo kordhintii 12 April 2021, ayaa ku fashilmay tartamadii ay galeen, waxaana xusid mudan in Cabdixakiin Macallin Axmed, loo xiray kursiga Aqalka sare ee uu Dhuusamareeb ka soo qaatay.
Dhanka kale, Senator Cabdullaahi Cali Xirsi (Timacadde) ayaa loo doortay Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka JFS, 2022-2026, kaas oo laga soo doorto Puntland, wuxuuna wareegga ugu danbeeya ka adkaaday, Senator Cabdullaahi Shiikh Ismaaciil (Fartaag).